Umgca wokuvelisa isichumiso esincinci esincinci. - YiZheng Heavy Oomatshini Co., Ltd.
Umgca wethu omncinci wokuvelisa isichumiso somgquba sikunika isikhokelo kwitekhnoloji yokuvelisa isichumiso sendalo, iteknoloji kunye nofakelo.
Kubatyali mali bezichumisi okanye amafama, ukuba unolwazi oluncinci malunga nemveliso yezichumiso eziphilayo kwaye awukho umthombo wabathengi, ungaqala kumgca omncinci wokuvelisa isichumiso semveliso.
Izinto ezikhoyo zokuvelisa imveliso yezichumiso eziphilayo
1. Umxhubi we-axis kabini
Umxhubi-axis kabini usebenzisa izinto olungumgubo ezifana uthuthu owomileyo ugungxulwe ngamanzi ngokulinganayo humidify izinto olomileyo olungumgubo, ukwenzela ukuba izinto humidified musa ukuvuka uthuthu owomileyo kwaye ungakhuphi ngaphandle amathontsi amanzi, ukuze kube lula ukuthuthwa ukulothula uthuthu olumanzi okanye ukugqithisela kwezinye izixhobo zokuhambisa.
2. Isikhewuli esitsha sesichumisi sezinto eziphilayo
Isichumisi esitsha sesichumiso esisetyenziselwa ukuvelisa umgquba wenkuku, umgquba wehagu, ubulongwe beenkomo, ikhabhoni emnyama, udongwe, i-kaolin kunye namanye amasuntswana. Umxholo wezinto zomgquba ungafikelela kwi-100%. Ubungakanani beengqungquthela kunye nokufana kunokutshintshwa ngokuhambelana nesantya sokudlulisa.
Ubungakanani be-LW-phezulu (mm)
Isomisi esomileyo sisetyenziselwa ukomisa amasuntswana omgquba oxonxiweyo. Ipleyiti yangaphakathi yokuphakamisa iyaqhubeka iphakamisa kwaye iphosa amasuntswana okubumba, ukuze izinto zinxibelelane ngokupheleleyo nomoya oshushu ukufezekisa injongo yokoma okufanayo.
Jika isantya (r / min)
4. I-roller cooler
I-roller roller epholileyo ngumatshini omkhulu opholileyo kwaye oshushu phantsi amasuntswana omanyolo obunjiweyo emva kokuma. Ngelixa kuncitshiswa ubushushu bamasuntswana ezichumisi ezichumileyo, umxholo wamanzi nawo uyancitshiswa. Ngumatshini omkhulu wokunyusa ukomelela kweengceba zomgquba ocoliweyo.
5. I-grinder yokubumba
Isityumzi sokutywina esime nkqo sisebenzisa i-carbide chain enganyangekiyo ngesantya esiphezulu kwinkqubo yokugaya, efanelekileyo ukugaya imveliso yemveliso yesichumiso kunye nee-refuels.
Ubungakanani obukhulu beengqungquthela zokutya (mm)
Emva kokuchoboza ubungakanani bezinto (mm)
Amandla emoto （kw）
6. ngesihlunu mqengqeleki
Isihlunu somatshini wokugudla wokuqengqeleka sisetyenziselwa ukwahlula amasuntswana omgquba oqhelekileyo kunye nezichumisi ezingekho mgangathweni.
7. Umatshini wokupakisha ngokuzenzekelayo
Sebenzisa oomatshini bokupakisha isichumiso esizenzekelayo ukugoqa amasuntswana esichumiso somgquba malunga neekhilogram ezimbini ukuya kwezingama-50 ngengxowa nganye.
Ukusetyenziswa kwemithombo yomoya （m3 / h）
Uxinzelelo lomthombo womoya, MPA
Ukupakisha ibhegi yenyathelo / imitha